Phakathi abasekeli ngendlela enempilo buthola ezingasho udumo ngebhayisikili. Asikwazi uyavuma: kumnandi uhambo omkhulu kuletha ezindleleni ukukhanya epaki noma ngebhayisikili imizila olunothile yehlathi. Nge umzimba kanye umphefumulo kuhlala. Inkinga enkulu, okuyinto kuqala kunazo zonke sinake abalandeli yalesi imoto, ukukhethwa esigabeni ibhayisikili.
Uma ku ukuhamba nge edolobheni emathangeni okudliwa eduze nendlu - amehlo akho kungacinywa bebheke eliphezulu okukhethwa kukho okuthi "ezisemadolobheni". Lapho injongo efanayo ibiza enqoba izintaba, amagquma kanye nezwe ogibele, imodeli kangcono lokhu - ibhayisikili dvuhpodvesny. Ukuthi wayeyoba wamukelekile, futhi isinqumo esifanele abalandeli lokuzijabulisa kakhulu futhi uhambo olude ku emabhayisikili.
Kungase kuphakame umbuzo othi: "Yini dvuhpodvesny ibhayisikili iyahluka kwenye ezivamile izimayini kukho?" Umehluko ezibaluleke kakhulu luhlaka sithuthukiswe ngalo igibele a modified ezingemuva isondo ukumiswa. Ngenxa bathuthukise ikhwalithi ingxenye, isinyathelo ngenhla futhi waqala esiphatha imoto, futhi lapho ukubusa okuhle, kukhona zokuphepha nenduduzo. Isici sesibili iyona khona entwasahlobo labaqaphi elingemuva. Lo msuka siye sathuthukisa permeability yensimbi "ihhashi", nokuthuthukisa impahla yayo lapho kokufika. Dvuhpodvesny ibhayisikili futhi kuyoba umngane omkhulu futhi befuna komuzi. Kodwa ngempela amandla akhe onesizathu rally entabeni nemithambeka, amanxiwa itshe futhi semfene.
Futhi emzini nasezintabeni
Uma wathi ezemidlalo imoto isetshenziswa kuphela ngenjongo ukuhlola ezitaladini eseduze namapaki, inkambo ezingemuva ukushaqeka mfutho kumele afakwe kuze kufinyelele 13 amasentimitha. Ngokwandisa lesi sibalo, dvuhpodvesny ibhayisikili kungenziwa eziqhutshwa ngenhloso unqoba amathrekhi kakhulu, uhlanga khulula (kangaka okuthiwa freeriding), ukushayela on ezindaweni ezimagebhugebhu bese ukwehla kusukela emaceleni ale ntaba. Kukhula isivinini isethi, ngcono ride libhayisikili ngaphandle elinokuthula idolobha epaki.
Top dvuhpodvesnye emabhayisikili ninezinto ahlukahlukene obuphelele uzimele. Iqiniso liwukuthi kungenxa ubukhulu ingxenye ibhayisikili, wonke umuntu angakwazi sithathe imoto ngesisekelo ekukhuleni kwayo. Ngaphezu kwalokho, eliphezulu nabangane ezimbili ezinamasondo ebekelwa umsebenzi esikhundleni esihlalweni. Izitolo eziningi ezingamaKristu ziyakujabulela ukuzinikela kukho esikahle futhi zikhululekile for umthengi. Ngaphezu kwalokho, i-control Ukugunda futhi eziphumulele, umnikazi kungaba silinganise engela amasondo ayo.
Njengomthetho, umkhandlu wamadoda onobuhle ezahlukene esachazwa ibhayisikili ubuye ezahlukene. Ngaphezu libhayisikili kungaba kwesitsha, futha, fenders, umthwalo yokubeka, lamanzi nokunye. Kuyinto ephawulekayo, kodwa eqolo phakathi emabhayisikili ezisezintabeni nje emabhayisikili dvuhpodvesnye. Amazwana ngalokhu imoto ikakhulukazi kuphela omuhle. Ububi eyinhloko yokuntuleka ukukwazi ulungise ukuphakama amasondo ayo. Futhi-ke, amanani aphezulu. Ukuze uzitholele ikhophi eliphezulu we abathengisi abaziwa umhlaba wonke ecela ruble engengaphansi kwengu-40 eziyinkulungwane.
Kanjani izinti yokuxhuma. On the ibhayisikili ngisho simple
Ibhayisikili Totem: incazelo, izici, umakhi kanye nokubuyekeza
Kukhethwa ibhayisikili kanye nokubuyekeza ezithakazelisayo. Stinger Amabhayisikili kanye nencazelo izici zabo
Engemuva ibhayisikili ikhasethi: incazelo, izici ukukhanda futhi esikhundleni
Indlela ukungena Technical University of Munich?
Tartar - indlela ukuhlukana? Toothpaste kusukela tartar. Ukususwa kwezimiso tartar - Izibuyekezo
Ukuqeqeshwa kwenqondo esakhiweni nethimba
Onomastics - isayensi study amagama siqu